Ahoana ny fomba fampandehanana ny A2F amin'ny Switch: Manangana fanamarinana roa amin'ny kaonty Nintendo? | la-manette.com
Ahoana ny fomba fampandehanana ny A2F amin'ny Switch: Manangana fanamarinana roa amin'ny kaonty Nintendo?
24 février 2021 feh JEAN-MICHEL CAPPIN
Amin'ity lahatsoratra ity dia hianatra ny fomba fametrahana fanamarinana dingana roa ho an'ny kaonty Nintendo ianao. Ny fanamarinana 2 dingana dia manampy sosona fiarovana fanampiny izay afaka manampy amin'ny fisorohana ny fidirana tsy nahazoana alalana amin'ny kaonty.
Ahoana ny fomba fampandehanana ny a2f amin'ny Switch?
Araho ny dingana manaraka :
1. Mandehana any amin'ny tranokalan'ny kaonty Nintendo ary midira amin'ny kaonty Nintendo anao.
2. Safidio ny firafitry ny Login sy ny fiarovana, avy eo midira mankany amin'ny fanamarinana 2-dingana ary tsindrio ny Edit.
3. Tsindrio 2-Step Verification Settings.
4. Kitiho ny Alefaso mailaka raha handefa kaody fanamarinana amin'ny adiresy mailaka ao anaty rakitra.
Raha diso ny adiresy imailaka dia kitiho ny lisitry ny menio Adiresy mailaka eo ambanin'ny User Info raha hanova izany.
5. Ampidiro ny kaody fanamarinana avy amin'ny mailaka, ary tsindrio Alefaso.
6. Apetraho amin'ny fitaovana marani-tsainao ny fampiharana Google Authenticator.
Ity dia fampiharana maimaim-poana, azo jerena ao amin'ny Google Play (Android) ary ao amin'ny App Store (iOS).
7. Ampiasao ny fampiharana fitaovana marani-tsaina hijerena ny kaody QR aseho amin'ny efijery Nintendo Account anao.
8. Hisy kaody fanamarinana 6 isa hiseho amin'ny fitaovana marani-tsainao. Ampidiro ao amin'ny saha ny kaody fanamarinana amin'ny dingana 3 eo amin'ny efijery Nintendo Account, ary apetraho.
9. Hisy lisitry ny kaody backup hita. Kitiho ny Copy raha handika ny kaody rehetra, dia apetaho amin'ny toerana azo antoka.
Ilaina ny kaody backup raha tsy afaka miditra amin'ny fampiharana Google Authenticator ianao. ATAOVY AO AMIN'NY TOERANA AMIN'NY TOERANA AZY.
Afaka mampiasa azy ireo ianao (indray mandeha tsirairay) raha tsy afaka miditra amin'ny fampiharana Google Authenticator ianao.
Vakio ihany koa: Ahoana ny fomba hanovana ny bateria amin'ny controller PS4?
10. Tsindrio I have save the backup codes, dia tsindrio OK.
Aorian'ny fametrahana dia azonao atao ny miverina any amin'ny sehatry ny fanamarinana dingana roa mba hijery ny kaody backup ary hanesorana ny famerana dingana roa.
Ahoana no hamonoana ny fanamarinana dingana roa ho an'ny kaonty Nintendo?
mihatra amin'ny: family Nintendo Switch, Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite, Nintendo Switch - modely OLED, kaonty Nintendo
Amin'ity fizarana ity dia hianatra ny fomba hanesorana ny fanamarinana 2 dingana ho an'ny kaonty Nintendo ianao.
Mandehana any amin'ny tranokalan'ny kaonty Nintendo ary midira amin'ny kaonty Nintendo anao.
Safidio ny firafitry ny Login sy ny fiarovana, avy eo midira mankany amin'ny fanamarinana 2-dingana ary tsindrio ny Edit.
Tsindrio 2-Step Verification Settings.
Tsindrio ny Remove Settings.
Ampidiro indray ny tenimiafinao Nintendo Account, ary tsindrio OK.
Vakio ny fampahalalana momba ny fanesorana fanamarinana 2 dingana, ary tsindrio avy eo Esory raha azonao antoka fa te hanala fanamarinana 2 dingana ianao.
Tsindrio OK raha hiverina amin'ny pejy "Connection and Security Settings".
Vakio ihany koa: Ahoana ny fampiasana Audacity hanoratra Audio amin'ny Windows sy Mac
Ny leaks rehetra an'ny Fortnite Skins sy ny kosmetika hafa hita ao amin'ny fanavaozana v18.40
Ahoana ny fomba fampandehanana ny a2f amin'ny Fortnite Switch?